घोषित स्व.वि.यु. निर्वाचन बहिस्कार गर्ने – राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ – ToplineKhabar
घोषित स्व.वि.यु. निर्वाचन बहिस्कार गर्ने – राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ
February 8, 2017 February 8, 2017 प्रदीप भट्ट0Comment
विद्यार्थीहरुको हक–अधिकार र माटो सुुहाउदो शिक्षा प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थाका निमित्त विगत निरन्तर संघर्ष गरिरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघले त्रिविद्धारा आगामी फागुन १४ मा हुने स्ववियु निर्वाचनको कुनै पनि औचित्य नरहेको भन्दै घोषित स्व.वि.यु. निर्वाचन बहिस्कार गर्नु पर्न मागराखि उपकुलपति तिर्थ खनियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ , यसै सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय संयोजक तारा प्रशाद अर्याल संग टपलाईन खबरकालागि प्रदिप भट्टले गरेको कुराकानी –
तपाईहरु घोषित स्ववियुु निर्वाचन बहिस्कार गर्दै हुनुहुन्छ किन ?
पहिलो हाम्रो भनाई के हो भने राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरु मार्फत आफ्ना कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने प्रमुख उदेश्यका साथ गर्न खाजिएको स्ववियु निर्वाचनको विकल्पमा स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद को फरक र स्वतन्त्र पद्धतिबाट निर्वाचन गरिने प्रतिवद्धता सम्बन्धित निकायबाट नआउदा सम्म निर्वाचन प्रकियालाई सम्पूर्ण तवरबाट बहिष्कार गछौं । दास्रो शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक अविष्ट पुरागर्ने प्रमुख थलोको रुपमा प्रयोग गरिएकोले प्राज्ञीक क्षेत्रलाई राजनीतिक गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्नु हुदैन र गर्न पनि पाईदैन त्यसैले हामि बहिस्कार गर्छौ । नेपालको डिग्री हिब्रु भाषाको बेषिक कोर्ष जस्तै बन्दा सरकार मौन छ । नेपालको दक्ष्य जनशति नेपालमै खपत हुनुपर्छ नकि चाईना,जापान कोरियाको निम्ती हुनुपर्छ ।
तपाईलाई स्ववियु चुनाव बहिस्कार गर्ने राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ हो भन्न मिल्छ ?
स्ववियु चुनाव बहिस्कार गर्ने राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ हो ।
त्यसो भए यो अराजक संगठन भएन र ?
म सबैलाई आस्वस्त पार्न चाहान्छु यो कुनै अराजक संध होईन । यो आम विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने संगठन हो । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर राज्य व्यवस्थालाई झक्झक्याउने संध हो । शैक्षिक प्रमाण प्रत्रलाई धितो राखि ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनि सामुहिक भोक हड्तालमा बसेको संघ हो । देशकोलागि योगदान गर्दा अराजक कसरि हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्ववियु निर्वाचनको मिति तयगरि सकेको अवस्थामा तपाईहरुले बहिस्कार गर्नुको अर्थ सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगर्नु होईन र ?
राजनीतिका अर्थ अनर्थ भन्दा मुद्धा प्रधान हुन्छन । हामिले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने कुरानै हुदैन । मात्र हाम्रो भनाई हो, राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला स्ववियुको अस्तित्व नै नरहेको हाम्रो ठहर छ । भ्रटाचार, गुटबन्दीलाई मलजल गर्ने स्ववियु हामिलाई चाहिएको होईन । हामिलाई स्वच्छ स्वतन्त्र विद्यार्थी परिषद चाहिएको हो । र अन्तराष्ट्रिय चलन पनि त्यहि हो । अहिलेको अवस्थामा सबैलाई चाहिएको स्ववियु भन्दा पनि विद्यार्थी परिषदको परिकल्पना हो ।
तपाई र तपाईको संघ सिन्डिकेट प्रणालीको पक्षधर हो ?
होईन हामि कदापि सिन्डिकेट प्रणालीको पक्षधर हुनै सक्दैनौं । हामि यो प्रणालीको बिराधी हो । २८ बर्ष उमेर हदबन्दिको अवधारणा अखिल क्रान्तिकारीले ल्यायो यो कदम सम्मानजनक छ । स्ववियु निर्वाचनमा एउटा प्रकारको ठुलो समुह विद्यार्थी उमेर कटिसकेको तर विद्यार्थी राजनीति गर्छु भनि ढुकेर बसिरहन्थ्यो, त्यो परिपाटिको पुर्णरुपमा अन्त्य भएको छ । एउटा नयाँ काम सुरु भएको छ । यस्लाई हामिले पनि स्वीकार गरेका छौं । अब हाम्रो भनाई के हो भने २८ बर्षे उमेर हदबन्दि जसरी लगाउन सफल भईयो, त्यसै गरि विद्यार्थी परिषद गठन हुनुपर्छ । राजनीतिलाई शैक्षिक थलोबाट हटाउनु पर्छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको २८ बर्ष उमेर हलबन्दि र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई तपाईको संघले कसरि हेरको छ ?
अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको २८ बर्ष उमेर हलबन्दि र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वागत योग्य छ । ४० बर्ष पुगेका गाँउ पालिका, गाविसमा लड्ने राजनीतिक दलका नेताहरु क्याम्पसमा आएर ढुकेर बस्ने जो परिपाटी थियो । त्यो अखिल क्रान्तिकारीको अगुवायीमा अन्त भएको छ । २८ बर्ष उमेर हदबन्दिको सिन्डिकेट तोडिएको छ, यो राम्रो काम हो । हाम्रो संघले निषेधको राजनीति गदैन, हामि सहकार्यको राजनीति गर्दछौं । राम्रो कामलाई गर्वकासाथ राम्रो भन्दछौं ।
तपाई राजनीति गर्नु हुन्छ वा आफुलाई राजनीतिज्ञ ठान्नु हुन्छ ?
राजनीति र राजनीतिज्ञ यि दुईओटा विषय एकअर्काका परिपुरक हन । राजनीति एउटा कमाई खाने भाँडोको रुपमा देखा प¥यो । त्यो समस्या विद्यार्थी राजनीतिमा मौलाउदै गयो । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने बहस हामिले चलाएका छौं । यो बहसमा सबैलाई सहयोग गर्न अपिल गर्दछु । मलाई राजनीति गर्छ भन्नुहोस या राजनीतिज्ञ ठान्नुहोस त्यो तपाईमा भरपर्ने कुरा हो ।
माओवादी पृष्ठभुमिबाट आउनु भयो । माओवादी आन्दोलनमा काम गर्न सक्नु भएन अनि संघ खोलेर बस्नु भएको छ भन्ने आरोप छनि ?
हो, मेरो पृष्ठभुमि माओवादी नै हो । मैले माओवादी आन्दोलनमा काम गरेर, कक्षा १० देखि डिग्री पास गरुन्जेल सम्म मलाई माओवादी अन्दोलनले शिक्षा जगतमा देखिएका समस्याहरुलाई नियाल्ने मौका दिलायो । विद्यार्थीहरुका प्रत्यक्ष समस्या सँग घुलमिल हुने र सामाधान गर्न सम्मको भुमिका मलाई दिएको थियो । त्यो मेरा निम्ती सिकाई र भोगाईको योगफ हो । सिकाई र भोगाई फरक पाटा रहेछन भन्ने जब मैले महशुस गरे अब यो माओवादी आन्दोलनबाट सकिदैन एउटा छुट्टै संघ निर्माण गरि शिक्षा जगतका समस्या हटाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो र म अहिले राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघको केन्द्रिय समिति संयोजक छु ।
बर्षपिच्छे संगठनको नाम परिवर्तन गरिराख्नुको कारण के हो ?
बस्तुले चेतनाको विकास गर्छ । चेतनाले त्यसका समस्याको बारेमा छलफल गर्छ । पहिचान गरिसकेपछि नयाँ शिद्धान्त प्रतिपादन बस्तुले चेतनामार्फत गर्छ । पहिले हामिले देखेको बेरोजागर बर्ग हो र बेरोजगार बर्गकालागि हामिले एउटा बेरोजगार युवा संघ चलायौ । त्यतिले मात्र नपुगेपछि उद्योगीहरुलाई पनि समेटेर आर्थिक समृद्धि अभियान चलायौं । समयको मागले त्यतिले पनि नभएपछि अहिले हामिले राष्ट्रवादी केन्द्रमार्फत सबैलाई समिटिने गरि नाम परिवर्तन गरेका हौं ।
आर्थीक समृद्धिको ढोल बजाउनुहुन्छ । संगठननै तपाईको आर्थीक धरापमा छ भनिन्छनि ?
हो यो साँचो कुरा हो । यो हाम्रो संगठनले उठाएको मुद्धा हो । राज्यको नीति मार्फत व्यवस्था समृद्धि बनाउनु पर्ने भन्ने तिर हाम्रो जोड हो । राज्यको नीति नहुदा धनी धनी बन्दै जाने गरिब झनझन गरिब बन्दै जाने स्थिति देखिएपछि यसको अवाज हाम्रो संगठनले उठाउदै आएको छ । अर्थीक संकटका कारण हाम्रो संगठनमा मात्र होईन सबै पार्टीमा यो समस्या देखिएको छ । जसका कारण विदेश पलायनत्ता बढेको छ । यसलाई राज्यले समयमै हल गर्नु पर्छ ।
← महिनावारी किन र कसरी हुन्छ ?
प्रस्तावित गोदावरी नपा वार्ड सम्मेलन सम्पन्न →
पूर्वमा गोली हान्ने आपराधिक समूह सक्रिय
प्रदेश नम्बर ७ को मुख्य मन्त्रीका दाबेदार – प्रेम प्रकाश भट्ट
January 8, 2018 प्रदीप भट्ट 0